Ikike Ojuju: Gini bu ihe, Ihe kpatara ya, na otu esi enweta ya!
Anyị ga-ede ọtụtụ ihe banyere ikike ọdịnaya, ma choro iwebata echiche na ụlọ ọrụ anyị anọwo na-etinye aka site n'enyemaka nke ndị mmekọ anyị na Mgbasa Ozi Metonymy na Dittoe PR ihe.
Ndabere na Nchịkwa Afọ
Ihe ịma aka anyị na-aga n'ihu na ndị ahịa anyị bụ na ọ dị ka enweghị usoro mgbe niile ka ha na-etinye ahịa ahịa ha. Altimeter na-akọ na 70% nke ndị ahịa anaghị enwe usoro ọdịnaya ma ọ bụ njikọta.
Onwere ihe ndi choro na post-analysis nke kwesiri ime na ahia ahia gi. Mbido ahụ:
Brand - Gị ụlọ ọrụ kwesịrị ihe guzobere omenala na njirimara.
Izi ozi - Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịchọpụta nghọta onye ndị na-ege gị ntị bụ na otu esi esi agwa ha okwu, ịkọwa onwe gị na ndị na-asọ gị mpi.
content - Ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịzụlite ọdịnaya nke na-enye azịza nke atụmanya na ndị ahịa na-enyocha n'ịntanetị, na-enye uru ma na-ewulite ntụkwasị obi na ha iji duru ha itinye aka na ụlọ ọrụ gị. A gha emezu nke a n'ofe ndi ozo.
Promotion - Dika ulo oru choputara ihe di elu, ha kwesiri ka akwalite ọdịnaya ahu iru ma nweta ndi ohuru. Ọ bụghị naanị nyocha akwụ ụgwọ, mana ịkwụ ụgwọ mmekọrịta mmadụ na mmekọrịta ọha na eze nke na-ebuli mgbasa ozi nkekọrịta, akwụ ụgwọ ma kwụọ ụgwọ.
analysis - Nyocha zuru ezu iji chọpụta ihe na-arụ ọrụ, ebe ọ na-arụ na oghere dị iche iche iji zụlite ọtụtụ ọdịnaya chọrọ emezu. Nyocha ahụ nwere ike igosi na ịkwesịrị ịgbanwe akara gị ma ọ bụ dozie ozi gị.
Anyị na-enwetakarị ndị ahịa chọrọ ịmali ozugbo iji mepụta ọdịnaya n'agbanyeghị na ha enweghị njirimara dị ike ma ọ bụ na ha aghọtaghị onye ha na-edere ma ọ bụ otu ha si eri ọdịnaya ahụ. N'oge ndị ọzọ, anyị na-ahụ nnukwu itinye ego na mmepe ọdịnaya na-enweghị atụmatụ iji kwalite ọdịnaya ahụ.
Ọ bụrụ na enwere adịghị ike na atụmatụ ndị bu ụzọ ma ọ bụ post-mmepụta na azụmaahịa ọdịnaya gị, ịnweghị ike ịmatacha mmetụta nke ọdịnaya ị na-emepe.
Ikike ọdịnaya bụ usoro guzobere ebe nyocha anaghị enye ihe ị ga-ede iji mejupụta ọchịchọ maka ọdịnaya gbasara ngwaahịa na ọrụ gị n'ịntanetị, ọ bụ usoro iji mee ka ọdịnaya nke ọdịnaya ahụ dịkwuo ogologo oge. Site na usoro ikike ọdịnaya dị irè, ọdịnaya gị ga-eme ka ọhụhụ na engines ọchụchọ, mgbasa ozi mmekọrịta, saịtị ndị dị mkpa na mpụga, yana nke gị.
Kedu otu esi ewepụta ọdịnaya iji zụlite ikike?
Ikike ọdịnaya na-eweta ihe ahịa agile ịbịakwute mmepụta na mmejuputa ọdịnaya gị. Ọdịnaya nwere nzube ma tụọ iji nọgide na-ewulite ikike.
Kedu ihe bụ Metrics of Content Authority
N'ihi na ị na-elele akụkụ ọ bụla nke akara gị, izi ozi na ọdịnaya, usoro a gụnyere ihe ọ bụla iji nyochaa arụmọrụ site na nnweta, njigide, na iwe ndị ahịa. A na-egosipụta njem ndị ahịa (ọ bụghị naanị otu) ka oge na-aga dị ka njiri mara ọdịnaya gị yana mmekọrịta ndị ahịa na ya na-ejide ma nyochaa - gụnyere mmata, mmetụta, ogo, echiche, ogo, ntụgharị, mkparịta ụka, mmekọrịta, mmetụta, pịa, mmeju, mbak, wdg.
Nsonaazụ nke Ahịa Ọdịnaya
A bụ ihe atụ dị mfe nke etu ọdịnaya ọdịnaya si eme ka ndị ahịa nweta ogo ogo ha. N'okpuru ebe a bụ nnyocha nke ọdịnaya onye ahịa na nchịkọta nchịkọta nke onye ahịa ahụ ọnwa ruo ọnwa n'ime afọ ole na ole gara aga. Rịba ama na n'ozuzu, ha na ogo na ala nke ibe 1 kachasị mma.
Nke a bụ ọdịnaya nke anyị mepụtara, kekọrịta ma bulie. Site na nhazi nke atọ ma ọ bụ nke anọ, uru nke usoro ọdịnaya a na-ekpuchi ọdịnaya ọ bụla nke onye ahịa ahụ mepụtara. Dika ima mara na onu-ahia site na onodu ndi ahu di elu karie ala nke ibe ma obu elu peeji abuo.
Edere okwu a site n'aka onye dere ya Bryant Tutterow, bụ onye mejuputara ma nụchaa atụmatụ ahụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Nsonaazụ dị ka nnabata mmasị. Site n'ilekwasị anya n'ofe dị iche iche nke ndị nkwukọrịta, ụdị ọdịnaya, na ebe ndị na-ege ntị na ịnya ụgbọ ala na ịkwalite na ịkwalite mbọ niile, anyị enweela ike ịbawanye ogo na iru ndị ahịa anyị ruo 940%.
Anyị ga-ede ọtụtụ ihe gbasara ikike ọdịnaya n'ọdịnihu dị nso. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-ebipụta ọtụtụ ọdịnaya n'ịntanetị mana ị naghị ahụ mmetụta gị na-abawanye, kpọtụrụ anyị na DK New Media ma anyị nwere ike inye aka.
Tags: onye nkuzi bryantikike ọdịnayacontent Marketingusoro ahia ahiaatụmatụ ọdịnayaDK New MediaInfographics Ahịanhazi ọchụchọogonjikwa ikikeelekọta mmadụ media ogoihegịnị bụ ikike ọdịnayaAkwụkwọ edemede
Nnukwu blog, enweghị ike ichere ịgụkwu na ikike ọdịnaya.
Nke a bara ezigbo uru. Isiokwu a kpuchitere ihe niile!
Ankit agba ọsọ
Sep 12, 2016 na 4:24 PM
Sep 13, 2016 na 8:53 PM